Le yiGigit Fit, isongo esitsha somsebenzi weSamsung | Iindaba zeGajethi
UJose Rubio | | Izixhobo ezinokunxitywa, elektroniki
Isamsung ithathe ithuba Umsitho ongapaswanga, kuba ukongeza ekunikezeleni ngeefowuni zabo ezintsha, i Galaxy S10 kunye Galaxy Folduphawu lwaseKorea isungule inani lezixhobo ezongezelelweyo, ekwabizwa ngokuba iintsimbi. Kunye nale smartphone sele ikhankanyiwe, kunye newatchwatch yayo entsha, indlela IGalaxy ActiveIbonise umsebenzi omtsha webhendi yeGlass Fit kunye neGalaxy Fit e.
Nangona ngeGalaxy Active sasinako ukuvuza ngaphambi komsitho, sikwazi ukudala ulindelo lwento esiza kuyifumana namhlanje kwi-Unpacked, kwimeko ye-Galaxy Fit yahlukile, kuba imalunga isixhobo ekungekho mntu ulindeleyo, kwaye yintoni eza ngayo buyisela uluhlu lweGearUkudityaniswa komzuzu nazo zonke izinto ezinokunxitywa kuluhlu lweGlass.
1 Ukucaciswa kweGalaxy Fit
2 Itshathi yokuthelekisa ye-Galaxy Fit
3 Ukongeza kuluhlu lweGalaxy
Ukucaciswa kweGalaxy Fit
Ngaphakathi kuluhlu olutsha lweGalaxy Fit, sifumana, ngendlela efanayo eyenzeka nge I-Samgung Galaxy S10, enye Isichazi-magama esitsha esichaza uhlobo olwenziwe lula yemveliso. Oko kukuthi, ukongeza kwifayile ye- Galaxy Fit, IGalaxy Fit e.
Umahluko phakathi kwezi nguqulelo zombini lala ikakhulu kwiscreen, ukuba ngombala kwi-Galaxy Fit kunye nomnyama nomhlophe kwi-Galaxy Fit e. Sikwafumana, njengumahluko obonakalayo ocacileyo, a Uluhlu olwahlukileyo lwemibala phakathi kweenguqulelo zombini yesongo esitsha seSamsung, ukwazi ukukhetha phakathi emnyama nesilivere kwimodeli esemgangathweni, Ngelixa ukhetho lukwandisa ukuya mnyama, mhlophe, mthubi, ngeyona ndlela ibiza kancinane, Ukunika ukubonakala kwezemidlalo kunye nokungacwangciswanga.
Kodwa kuyacaca ukuba ukusuka kwenye indawo kuye kwafuneka basike umva ukuze babenakho ukuvelisa imveliso ngexabiso eliphantsi. Ukongeza kwiscreen esimnyama nesimhlophe seGalit Fit e, njengoko siza kubona kwitheyibhile yokuthelekisa engezantsi, siyayifumana Iipikseli ezisezantsi. Oku mhlawumbi kwiscreen esincinci akubalulekanga njengoko kunokuba nako kwi-smartphone, kodwa yinkcukacha ekufuneka ithathelwe ingqalelo.
Ngendlela efanayo umahluko kwi-RAM, iphindwe kabini kwiGalit Fit xa kuthelekiswa nemodeli e, kunye Ibhetri ihlupheka phantse ama-50% kule modeli yamva nje, ifika ukuya kuthi ga evekini ubude phakathi komthwalo kunye nomthwalo okona kulungileyo.
Itshathi yokuthelekisa ye-Galaxy Fit
IGalaxy Fit e
umbala Isilivere emnyama Mnyama-Mhlophe-Mthubi
Isikrini Umbala opheleleyo we-AMOLED 0.74 "U-PMOLED
Isigqibo I-120 x 240 - 282 ppi I-64 x 128 - 193 ppi
Inkqubo IMCU Cortex M33F 96MHz + M0 16 MHZ IMCU Cortex M0 96MHz
Ubunzima ngentambo I-24 gram I-15 gram
i-ram I-512 KB + 2048 KB 128 KB
Ukugcina I-32MB yeROM I-4MB yeROM
Izixhobo Pulse + Accelerometer + Gyroscope Pulse + Accelerometer
ICarga I-NFC engenazingcingo Pogo
Ukuchasa 5ATM MIL STD 810G 5ATM MIL STD 810G
Ukongeza kuluhlu lweGalaxy
Ngokungafaniyo ne-Samsung Gear Fit kunye neGear Fit 2, i IGalaxy Fit inesikrini esicaba, eshiya ngasemva isikrini esigobileyo sabo bangaphambili. Ngale nto yoyilo phumelela ngokulula kwaye ivumela ukonga indleko ukuba umsebenzisi wokugqibela ngokungathandabuzekiyo aya kuyixabisa, ngaphandle kwenguqulo ayikhethayo.
Kunye nembangi entsha yokumkanikazi wezacholo zomsebenzi, iXiaomi Mi Band, Isamsung inethemba lokuqhubeka nokwandisa indawo yentengiso, Ukubonelela ngemveliso egama layo sisiqinisekiso somgangatho, njengoko kunjalo kulo lonke uluhlu lwemveliso yeGlass, kwabo basebenzisi abangenakho ukuchitha isixa semali esikhulu ukuthenga into enxibekayo, okanye abajongayo uthotho lwe Iimpawu ezilula kunokunikezelwa kwe-smartwatch, Njenge entsha IGalaxy Active.
Nangona ngaphandle kwamathandabuzo, i-Galaxy Fit injalo kugxilwe ekubekweni esweni ngexesha lezemidlalo, ukuqala ngobhaliso lomsebenzi ngamnye ixesha ngalinye siqala ukuyenza, ngaphandle kokusetha okanye ukumisela nayiphi na iparameter kwisongo sethu. Ewe kunjalo, inakho jonga ukulala kwethu kunye nokubetha kwentliziyo, usinike ulwazi malunga nezi, kunye iingcebiso zokuphucula impilo yethu.
Nangona kunjalo Isamsung ayikaqinisekisi ngamaxabiso asemthethweniUluhlu lwamaxabiso kulindeleke ukuba lubephakathi kwe-30 euros ukuba iindleko zeXiaomi Mi Band, okhuphisana naye ophambili, nangaphezulu kwe- € 130 ebiza ixabiso langoku leGear Fit 2. Umhla wokukhutshwa awukaqinisekiswa., nangona kungayi kuba sengqiqweni ukucinga ukuba izakufumaneka ukusukela nge-8 ezayo kaMatshi, njengoko kuyakwenzeka ngewatchwatch entsha yosapho lweGlass, iGlass Active.
Yiba njalo, kungekudala usapho Galaxy iya kukhula ukuziqhelanisa neemfuno zomsebenzisi ngamnye, kwaye asithandabuzi ukuba i-Galaxy Fit entsha, kunye nohlobo lwayo olwenziwe lula, i-Galaxy Fit e, iya kuba zezona modeli zaziwayo nezixhaphakileyo phakathi kwabathengi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Le yiGalaxy Fit, isongo esitsha somsebenzi weSamsung